मुख्य पृष्ठसम्पादकीयअनपेक्षित नहोस् राक्षस संवत्सर २०७८ मा
पत्रकारितामा नयाँ शब्दको प्रयोग दोहोरिरहेको हुन्छ । कस्ता समाचार मानिसले बढी मन पराउँछन् भन्ने जिज्ञासामा नयाँ जानकारी वा हिजोसम्म थाहा नभएको विषय सन्दर्भहरू परिदृश्यमा आउँछन् । यस अर्थमा हाल जे भइरहेको छ, अहिले हामी जे देखिरहेका छौँ त्यो नयाँ हो भन्ने अर्थ पत्रकारिताले लगाउँछ ।
तर संसारमा कुनै पनि वस्तु एकदम नयाँ हुन्न । ऐनामा देखिने प्रतिबिम्व पनि दस ननो सेकेन्ड पुरानो हुन्छ । पृथ्वीनारायण शाहले चन्द्रागिरि डाँडाबाट पहिलोपल्ट तीन सहर नेपाललाई कुन दिन धीत मरुञ्जेल हेरेका थिए ? यो बृहत् खोज–अनुसन्धानको विषय हो । कसैले खोज–अनुसन्धान गरेर तिथिमिति, घटना थाहा दियो भने त्यो तपाईका लागि नयाँ हुन्छ होला तर जसलाई पहिलेदेखि थाहा थियो उसका हकमा नयाँ हुँदैन । कतिपयलाई त उल्लिखत प्रश्न नै नयाँ लागेको हुनुपर्छ ।
नयाँ शब्दको अर्थ अमुक व्यक्ति र सन्दर्भपिच्छे फरक हुन्छ । नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको बृहत् नेपाली शब्दकोशमा नयाँ शब्दबारे भनिएको छ– हालसालै मात्र देखापरेको, भर्खरै मात्र व्यवहारमा आएको, भर्खरै जन्मेको, हालैको, भर्खरै खोजिएको, भर्खरै पत्ता लागेको, कुनै काम भर्खरै सिक्न लागेको, कामको अनुभव नभएको । शब्दकोशका अनुसार नयाँका पर्यायवाची शब्दहरू हुन् नव, नूतन, नवीन, नौलो, सिकारु, कोरा, अनुभवहीन । समय सन्दर्भमा अनुभवहीनता पनि नयाँपनको पर्याय हुनेगर्छ ।
कवि टिएस इलिअटका अनुसार गएको वर्षको शब्द गएको वर्षकै भाषा थियो, अर्को वर्षले अर्कै भाषाको प्रतीक्षा गर्छ ।
नेपालमा एउटा पत्रिकाको मास्टहेड छ, नयाँ पत्रिका । तर यसमा नयाँ के छ, जो अरूमा छैन ? भन्नलाई नयाँ भनिए पनि यो पत्रिका कति दिन, कति मिनेटसम्म नयाँ भइरहन्छ ? कुनै वस्तु, विचार र परिस्थिति कतिञ्जेल नयाँ भइराख्छ ? कुनै खोज, कुनै उत्पादन, कुनै विचार, कुनै जन्म कहिलेसम्म नयाँ हुन्छ ? जिज्ञासाको सीमान्तमा नयाँ भनिएको विषय वा सन्दर्भमा पुरानै अलमल व्याप्त भेटिन्छ । रहरिलो नयाँपनमा जवाफदेही कोही छैन । पुरानाहरूलाई थाहा छैन ।
नेताहरूले ‘नयाँ नेपाल’ बनाउने भनेको कुरा पुरानो भयो । बितेको समयमा केही सिमानाहरू हेरफेर भएका छन् । नक्सामा चुच्चोको जोड–घटाउ गरियो । सँगसँगै सङ्घीयताको हविगत नयाँ बोतलमा पुरानो रक्सीभन्दा बढी छैन । हाम्रो विचार, सोच, चिन्तन, सङ्गठन, कार्यशैली, प्रस्तुतिमा पुरानैको निरन्तरता छ ।
तालतलैया क्षेत्रमा फुलेको सुनाखरी ।
दुनियाँमा जात–भूगोल र मान्यताअनुसार आ–आफ्नै खालका सन्दर्भ र नयाँ वर्षहरू छन् । न्यु इयर, नयाँ वर्ष, ल्होसार, माघी, न्यहुँ द्याँ आदि–इत्यादि । संवत्, वर्ष; साल; संवत्सर आदि नाम जे भए पनि हामी नयाँ भनिएको वर्षका लागि थप योजना, काम र सोचका माध्यमबाट फरक स्वादहरूको सपना बुन्ने गर्छौँ । अतिरिक्त अपेक्षा र कामना गर्छौँ । पात्रो फेर्ने पहिलो दिनलाई हर्षोल्लासका साथ स्वागत गर्नुको अन्तर्यमा यो वर्ष त्यस्तो कुनै कार्य गर्ने छैन, जसले गर्दा म विगतमा जस्तो दुःखी हुन परोस् भन्ने तर्कना मिसिएको हुन्छ ।
कवि टिएस इलिअटका अनुसार गएको वर्षको शब्द गएको वर्षकै भाषा थियो, अर्को वर्षले अर्कै भाषाको प्रतीक्षा गर्छ । भनिन्छ, बाटो बिराएकोलाई सही बाटोमा हिँड्न अभिप्रेरित र सही बाटोमा हिँडिराखेकालाई निरन्तर विश्वस्त बनाउने अवसर पनि हो, नयाँ वर्ष भनिएको समय–सन्दर्भ ।
यतिबेला सेरोफेरोमा आँपका मुजुरा र ढकमक्क सिन्दुरे फुलेका पलाँसका हाँगाहरूसँगै बसन्त आगमन सूचक कोइलीको कुहुकुहुले वातावरणमा बासन्ती मादकता फैलिएको छ । गत वर्षका तिता यादहरू बिर्साउन क्यालेन्डर फेरिएको छ । यसैगरी, हरेक वर्ष संवत्सर, पात्रोहरू फेरिन्छन्, फेरिँदै आएका छन् ।
यद्यपि मान्छे नयाँ चाहन्छ, भर्खर किनेको किताब, सवारीसाधन, उपकरणहरू निकै दिनसम्म जतन गरिराख्छ । मान्छेमा सनातनदेखि पूरा नहुने क्षणभङ्गुर चाहना छ । नवीनताको खोजी जारिरहन्छ । समय चलिरहन्छ । प्रयोगहरू भइरहन्छन् । फूलहरू फुलिरहन्छन् । पृथ्वी घुमिरहन्छ ।
राक्षस संवत्सरको समयमा मानिसमा क्रुरता, उपद्रो, अभद्रता अझ बढ्दै जाने ज्योतिष शास्त्रको मत छ । पृथ्वी, जल, तेज, वायु आकाश र सुरक्षामा मङ्गलग्रहको अधिकार हुन्छ । यस पटक मङ्गल राजा र मन्त्री भएकाले ती क्षेत्रमा नकारात्मक फल प्राप्त हुने आँकलन गरिएको छ ।
त्यही निरन्तरतामा जिसस क्राइस्टको जन्मभन्दा ५७ अघि राजा विक्रम आदित्यले प्रयोगमा ल्याएको पात्रोअनुसार आजदेखि अर्को संवत्सर प्रारम्भ भएको छ । नेपालमा राष्ट्रिय दिवसका रूपमा मनाइने नयाँ वर्ष भनिने वैशाख १ गतेको दिनदेखि जहिल्यै संवत्सर फेरिने गर्छ ।
सौर्य गणनाअनुसार सूर्य मेष संक्रान्तिबाट आरम्भ भई पुनः सोही राशिमा पुग्ने बेलासम्मको अर्थात् सम्पूर्ण ऋतुको चक्रलाई संवत्सर भनिन्छ । चान्द्रमानको हिसाबले भने चैत्र शुक्ल प्रतिपदालाई संवत्सर प्रारम्भ हुने दिन मानिन्छ । संवत्सर भनेको बाह्र महिनाको अवधि हो, जुन बृहस्पति ग्रहको उदय र अस्तको आधारमा निर्धारण गर्ने गरिन्छ ।
केशरको फूल .
बाह्र महिना मिली बनेको सौरमानका आधारमा साठीवटा संवत्सर छन् । प्रभव, विभव, शुक्र, प्रमोद, प्राजापत्य, अङ्गिरस, श्रीमुख, भाव, युवा, धाता, ईश्वर, बहुधान्य, प्रमाथी, विक्रम, वृष, चित्रभानु, स्वर्भानु, दारुण, पार्थिव, व्यय, वर्षण, सर्वजित्, सर्वधारी, मानुष, विरोधी, विकृत, खर, नन्दन, विजय, जय, मन्मथ, दुर्मुख, हेमलम्ब, विलम्ब, विकारी, सर्वरी, जव, सुभिक्ष, शोभन, क्रोध, विश्वावसु, पराभव, प्लवङ्ग, कालिक, सौम्य, साधारण, अहिछत्र, पारिवारी, प्रमाथी, आनन्द, राक्षस, अनल, पिङ्गल, सिद्धार्थ, रौद्र, दुर्मति, दुन्दुभी, रक्त, क्रोध र क्षय ।
सौर्य र चान्द्र गणनाअनुसार आज (बुधबार)देखि प्रमादी सकिएर राक्षस संवत्सर सुरु भएको छ । प्रमादीपछि आनन्द संवत्सर आउनुपर्नेमा बृहस्पतिको शीघ्र गतिका कारणले आनन्द संवत्सर क्षय भएको मान्दै पङ्चाङ्गकर्ताले त्यसपछि आउने राक्षस संवत्सर २०७८ सालका लागि निर्धारण गरेका छन् । राक्षस संवत्सरको समय भएकाले यो वर्ष मानिसमा क्रुरता, उपद्रो, अभद्रता अझ बढ्दै जाने ज्योतिष शास्त्रको मत छ । शास्त्रअनुसार पृथ्वी, जल, तेज, वायु आकाश र सुरक्षामा मङ्गलग्रहको अधिकार हुन्छ । यस पटक मङ्गल राजा र मन्त्री भएकाले ती क्षेत्रमा नकारात्मक फल प्राप्त हुने आँकलन गरिएको छ ।
वैदिक शास्त्रीय सिद्धान्त र अध्ययनअनुसार फलहरू असल–खराब जे भनिए पनि सारमा त्यो मानवसहित पृथ्वीमा भएका सबै प्राणी, चरचर जगतको व्यवहारमा भर पर्छ । कोसी अनलाइनका पाठक, सहकर्मी, विज्ञापनदाता, शुभेच्छुक, आलोचक सबैको जीवनमा वर्ष २०७८ को पहिलो दिनदेखि नै शुभ बनोस् । हार्दिक शुभकामना !
नयाँ शुभकामना २०७८